युरोपदेखि एशियासम्मका धेरै देशमा स्टेल्थ ओमिक्रोनको लहर, जान्नुहोस् भारतका लागि कति खतरा ? omikron ba.2 from Europe to Asia
HomeNew Updareयुरोपदेखि एशियासम्मका धेरै देशमा स्टेल्थ ओमिक्रोनको लहर, जान्नुहोस् भारतका लागि कति खतरा...
विज्ञहरूका अनुसार भारतमा कोरोना भाइरसको महामारीको चौथो लहर जुन वा जुलाईमा चरम सीमामा पुग्न सक्छ र त्यसपछि अक्टोबरमा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।विश्वका धेरै देशहरूमा बूममा स्टेल्थ ओमिक्रोन!
Omicron को सब-भ्यारियन्ट BA.2 ले संसारका धेरै भागहरूमा विनाश ल्याएको छ। पश्चिममा अमेरिकादेखि पूर्वमा चीन र मध्यमा युरोपसम्म केसहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। फ्रान्सले भने कि यसमा यो भिन्नताका कारण अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या बढेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार आगामी महिनाहरूमा भारतमा चौथो लहर देखिन सक्छ। भारतमा कोरोना भाइरसको चौथो लहर जुन वा जुलाईमा चरम सीमामा पुग्न सक्छ। अक्टोबरमा यो घट्ने अनुमान छ।
कोरोनाको कहर रोकिने नाम छैन । सधैं नयाँ रूपहरू जन्मिन्छन् र सारा संसारको लागि तनाव बन्छन्। Omicron को दोस्रो सब-भ्यारिएन्ट BA.2 लाई स्टिल्थ भेरियन्ट पनि भनिन्छ, हाल धेरै देशहरूमा कहर सिर्जना गरिरहेको छ। यो BA.1 भन्दा धेरै छिटो फैलिन्छ।
संसारभर मामिलाहरू बढ्दै गएका छन्
युरोप, जर्मनी, फ्रान्स र इटालीमा लाखौं नयाँ संक्रमित बिरामीहरू देखा परिरहेका छन्। जर्मनीमा शुक्रबार मात्रै ३ लाख नयाँ कोभिड केस दर्ता भएका छन् । गत साता बेलायतमा एक हप्तामा ४२ लाख मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
अमेरिकामा पनि ३३ प्रतिशत केसहरू यस BA.2 Omicron बाट आएका छन्। चीन र दक्षिण कोरियामा पनि ओमिक्रोनको सब-भ्यारियन्ट BA.2 का केसहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। चीनले ओमिक्रोनका सबै भेरियन्टहरू रोक्न सांघाईमा कडा तालाबन्दी लगाएको छ। सांघाई सबैभन्दा ठूलो वित्तीय केन्द्रहरू मध्ये एक हो।
अमेरिकामा कोरोनाको अवस्था
युएस सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका अनुसार अमेरिकामा कुल कोरोना संक्रमित बिरामीमध्ये ३३ प्रतिशत केस यस BA.2 Omicron बाट आएका छन्। अमेरिकामा हरेक दिन औसत २८,६०० नयाँ केसहरू रिपोर्ट भइरहेका छन्। त्यहाँ, BA.2 सब-भ्यारिएन्ट केसहरूमा बृद्धिको कारणको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर, साप्ताहिक स्तरमा कोरोनाको तथ्यांकमा भने गिरावट आएको छ ।
See also नेपालमा रेल कुद्न थाल्यो, जयनगरदेखि जनकपुरसम्म ‘ड्राइ रन’ रेल सुरु
युरोपमा BA.2 लहर बूम
युरोपका धेरै देशहरूमा केसहरू चिन्ताजनक दरमा बढिरहेका छन्। बेलायतमा मार्च १९ मा समाप्त भएको हप्तामा ४३ लाख केसहरू रिपोर्ट गरिएको थियो। राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार, केसहरू इङ्गल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्समा रेकर्ड स्तरमा पुगेका छन्।
फ्रान्सका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भनेका छन् कि उनीहरूको अस्पतालमा भर्ना बिरामीहरूको संख्या लगातार दोस्रो हप्तामा बढेको छ। नयाँ केसहरू पनि बढिरहेका छन्। सात दिनको आधारमा शुक्रबार औसत सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ लाख १० हजार ८ सय ७४ पुगेको छ ।
Wave of stealth omikron in many countries from Europe to Asia
Previous articleOmicron BA.2 विश्वका धेरै देशहरूमा फेरि विनाशकारी विनाश! ताइवानबाट बोधगया आएकी महिलामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ
Next articleजोतिस शास्त्रअनुसार यो वार जन्मने मानिस एस्तो